Narayani Development Bank(Narayani Development Bank) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको अवितरित हकप्रद सेयर भोलिबाट लिलामीमा राखिने
काठमाण्डौ । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले भोलि चैत ३ गतेदेखि अवितरित हकप्रद सेयर लिलामीमार्फत बेच्ने भएको छ। बैंकले गत माघ १३ गतेदेखि फागुन ३ गतेसम्म निष्कासन गरेको हकप्रदमा खरिद आवेदन नपरेको कुल २२ हजार ५५७ कित्ता सेयर लिलामीमार्फत बेच्न लागेको हो। जसमा संस्थापक सेयर १५ हजार ९७४ कित्ता र सर्वसाधारण सेयर ६ हजार ५८३ कित्ता रहेको...
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको १००% हकप्रदमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको सतप्रतिशत हकप्रद सेयरमा आवेदन दिने आज सोमबार अन्तिम दिन रहेको छ। यो बैंकले गत माघ १३ गतेबाट १ः१ अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गरेको थियो। बैंकले १०० रुपैयाँ अंकित दरका ६ कराड ५६ लाख १६ हजार ९०० रुपैयाँबराबरको कुल ६ लाख ५६ हजार १६९ कित्ता सेयर निष्कासन गरेको छ। हकप्रद सेयर निष्कासन तथा बिक्री...
काठमाण्डौ । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको सतप्रतिशत हकप्रद सेयरमा आज मंगलबार (माघ १३ गते) बाट आवेदन खुलेको छ। यो बैंकलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत पुस २० गते हकप्रद निष्कासनको अनुमति दिएको थियो। सोहीअनुसार बैंकले १ः१ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको हो। बैंकले १०० रुपैयाँ अंकित दरका ६ कराड ५६ लाख १६ हजार ९०० रुपैयाँबराबरको...
भोलिबाट नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद खुल्दै, कहिलेसम्म कायम सेयरधनीले भर्न पाउने ?
काठमाण्डौ । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको सतप्रतिशत हकप्रद सेयर भोलि माघ १३ गतेबाट निष्कासन हुने भएको छ। यो बैंकलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत पुस २० गते हकप्रद निष्कासनको अनुमति दिएको थियो। सोहीअनुसार बैंकले १ः१ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको हो। बैंकले १०० रुपैयाँ अंकित दरका ६ कराड ५६ लाख १६ हजार ९०० रुपैयाँबराबरको...
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले १ः१ हकप्रद माघ १३ बाट बिक्री खोल्ने, कहिलेसम्म कायम सेयरधनीले पाउने?
काठमाण्डौ । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको सतप्रतिशत हकप्रद सेयर आउँदो माघ १३ गतेबाट निष्कासन हुने भएको छ। यो बैंकलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत पुस २० गते हकप्रद निष्कासनको अनुमति दिएको थियो। सोहीअनुसार बैंकले १ः१ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको हो। बैंकले १०० रुपैयाँ अंकित दरका ६ कराड ५६ लाख १६ हजार ९०० रुपैयाँबराबरको...
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले पायो १००% हकप्रद निष्कासनको अनुमति, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई सतप्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति दिएको छ। बोर्डले मंगलबार (पुस २० गते) यो बैंकलाई १ः१ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति दिएको हो। योसँगै अब बैंकले ६ करोड ५६ लाख १६ हजार ९०० रुपैयाँबराबरको ६ लाख ५६ हजार १६९ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्नेछ। बैंकको १८ औँ...
सेञ्चुरी बैंकका ७ शाखाको एकैदिन उद्घाटन
काठमाण्डौ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले पौष २१ गते आफ्नो ७ वटा नयाँ शाखाहरुको भर्चुअल उद्घाटन गरेको छ। बैंकको ७ वटा नयाँ शाखाहरुमध्ये बाँके जिल्ला, कोहलपुर शाखाको बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठबाट, मुस्ताङ्ग जिल्ला, लेते शाखाको बैंकको सञ्चालक समितिका सदस्य डा. गीता प्रधानबाट, ललितपुर जिल्ला, भोलढोका, बालकुमारी...
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको धितोपत्र किनबेच फुकुवा, भोलिबाट कारोबारमा आउने
काठमाण्डौ । झन्डै ७ वर्षपछि धितोपत्र दोस्रो बजारमा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर कारोबार भोलि मंगलबार खुल्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७० साल चैत २७ गतेदेखि लागू हुने गरी यो बैंकलाई समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था घोषणा गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै निक्षेप स्वीकार गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्ने, जमानत प्राप्त...
काठमाण्डौ । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लि.को १८ औ वार्षिक साधारण सभा आज शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । बैंकका अध्यक्ष चन्द्रमान मलेकुको अध्यक्षतामा बसेको सभाले बैंकको आ.व. २०७५/७६को वार्षिक वित्तीय विवरण, नाफा नोक्सान हिसाव पारित गर्नुको साथै एक बराबर एक (१ः१) हकप्रद शेयर जारी गर्न पनि प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस हकप्रद निश्कासन पश्चात...
राष्ट्र बैंकले नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई ‘समस्याग्रस्त’ को सूचीबाट हटायो
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाको सूचीबाट हटाएको छ। राष्ट्र बैंकको गत साउन ८ गतेको निर्णयअनुसार नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त अवस्थाबाट सःसर्त फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि राष्ट्र बैंकले २०७० साल चैत २७ गतेदेखि लागू हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐत...